के हो डिम्याट खाता, भर्ने कसरी ? – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
भोलिबाट सुरु हुने त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक
काठमाडौं प्लाजालाई नेपाल ट्रस्टले सिल गरर्यो
अर्घाखाँचीकी एक महिलाको कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
भारतमा गत २४ घण्टामा थप २ लाख १७ हजार भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण
विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नको अधिकार स्थानीय तहलाई
चट्याङका कारण तीनजनाको मृत्यु र चारजना घाइते
संक्रमण पुष्टि भएका विद्यालयलाई एक साताका लागि बन्द गर्न निर्णय
के हो डिम्याट खाता, भर्ने कसरी ?
लेखक : कमल नेपाल
प्रकासित : २० चैत्र २०७७, शुक्रबार
हाल डिम्याट खाता खोल्नेहरु ह्वात्तै बढेका छन्। सिडिएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार यस्तो खाता खोल्नेको संख्या ३२ लाख ७२ हजार पुगेको छ।
यद्यपि कतिपयले दुई खाता खोलेका हुन्छन्। यस्तो खाता दुईभन्दा बढी खोल्न भने पाइने छैन। दुईभन्दा बढी खाता खोलेमा रद्द हुने प्रावधान छ।
असार मसान्तसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या १६ लाख ८६ हजार १०२ थियो। ९ महिनामै डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या दोब्बर हुनुले सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको संख्या बढेको पुष्टि गर्दछ।
सेयर बजारबारे जति बढी प्रचार, प्रसार हुन्छ त्यति नै बढी डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या बढ्ने गरेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए।
‘बजार बढेपछि नयाँ लगानीकर्ता पनि थपिन्छन्, हाल नयाँ बीमा कम्पनीसहित धेरैको आइपिओ पनि आइरहेको छ, यसले पनि डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या बढेको हो’ उनले सेतोपाटीसँग भने। कतिपयले प्राथमिक सेयर भर्नकै लागि पनि डिम्याट खाता खोल्ने गरेका छन्।
डिम्याट खाता नभएकाले प्राथमिक सेयर भर्न पनि पाउँदैनन्। दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न पनि पाउँदैनन्। कतिपयले अहिले पनि सेयर प्रमाणपत्र नै घरमा राखिरहेका छन्।
अंग्रेजी शव्द ‘डिम्याट्रिलाइज्ड’को छोटकरी शव्द नै डिम्याट हो। नेपालीमा यसको अर्थ अभौतिक खाता हुन्छ।
विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री हुँदा पहिले भौतिक अर्थात कागजी प्रमाणपत्रकै रुपमा हस्तान्तरण हुने गर्दथ्यो।अर्थात सेयर बेच्नेले प्रमाणपत्र नै दिने, खरिद गर्नेले फेरि आफ्नो नाममा प्रमाणपत्र नै पाउँथे।
२०७२ माघ २ गतेबाट डिम्याट खाता पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको हो। हाल सेयर अभौतिक रुपमा अर्थात यहीं डिम्याट खातामा सिधै हस्तान्तरण हुन्छ। जसरी हामीले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्छौं, त्यसैगरी डिम्याट खातामा किनेको सेयर आफै जम्मा हुन्छ।
कसरी, कहाँ खोल्ने खाता?
यो खाता विभिन्न बैंकका सहायक कम्पनीहरुमा खोल्न सकिन्छ। सहायक कम्पनी भएका बैंकहरुले नै यस्तो खाता खोलिदिन्छन्।
त्यस्तै ब्रोकर कम्पनीहरुमार्फत पनि यस्तो खाता खोल्न सकिन्छ। यो खाता खोलिदिने संस्थालाई निक्षेप सदस्य (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट) भनिन्छ। ७६ वटा यस्ता निक्षेप सदस्य छन्। यस्तो खाता खोल्नका लागि बैंक खाता नम्वर, नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी र फोटो चाहिन्छ। आफूले कारोबार गर्ने बैंक वा ब्रोकर कम्पनीमै यस्तो खाता खोल्न सकिन्छ।
धेरैले यस्तो खाता खोलेवापत कुनै शुल्क लिँदैनन्। केहीले एक सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन्। डिम्याट खाता खोलेपछि तपाईंलाई १६ अंकको डिम्याट खाता नम्वर प्राप्त हुन्छ।
सो नम्वर पाएपछि मात्रै तपाईंले प्राथमिक सेयर भर्न वा दोस्रो बजार (नेप्से) बाट खरिदबिक्री गर्न सक्नेछन्।
आफ्नो डिम्याट खातामा कुन कुन कम्पनीको, कति सेयर छ? त्यसको अहिलेको बजार मूल्य कति छ, खातामा सेयर जम्मा भए/नभएको जस्ता विवरण पनि आफूले नै मोबाइल वा ल्यापटपबाट हेर्न सकिन्छ। यसका लागि डिम्याट खाता खोलिदिने संस्थाले डिम्याट एकाउन्ट लगइनको युजरनेम र पासवर्ड दिन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि बिहान बोलाए सर्वदलीय बैठक